၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာမယ့် ကားတွေ
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ကားအမျိုးအစားအသစ်တွေနဲ့အတူ တကျော့ပြန်လာတဲ့ကားတွေလည်း တော်တော်များခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပြောင်းလဲလာကြတာပါ။ အခု ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ အမျိုးအစားနဲ့ segment ခြင်း သိပ်မကွာတဲ့ကားလေးတွေကို တွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်ကားက စိတ်လှုပ်ရှားစရာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကို ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။
Subaru BRZ လား ? Nissan Z လား?
Subaru BRZ ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်နီးပါးလောက်က စခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ပြီးအကောင်အထည်ဖေါ်တာမျိုးဖြစ်ပြီး Nissan ရဲ့ Z ကတော့ twin-turbo V6 အင်ဂျင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စီးစလုံးက six-speed manual gearbox တွေနဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်ယက်တွေဖြစ်ကြတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် နောက်ယက် manual gear တွေ မသေဆုံးသေးဘူးဆိုတာ ပြသနေတာပါပဲ။
GMC Hummer EV လား ? Tesla Cybertruck လား ?
Electric pickup trucks တွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲပါပဲ။ GM ကတော့ သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး pickup trucks Hummer ကို ဒီ ၂၀၂၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စပြီး ဖြန့်ချိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Cybertruck နဲ့ ပြိုင်ဆွဲကြဦးမလားမသိဘူး။
Ford Bronco လား ? Jeep Wrangler Rubicon 392 လား ?
တစ်စီးက turbocharged cylinder လေးလုံး ဒါမှမဟုတ် twin-turbo V6 ကြိုက်ရာရွေးပြောနေချိန်မှာ နောက်တစီးကတော့ 470 Hp အထိ အမြင့်ဆုံးပါဝါထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ V8 နဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့တူတာကတော့ သူတို့ရဲ့ off-road လမ်းကြမ်းမောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပါပဲ။ ဘယ်ကားကိုမှာ သံသယဖြစ်စရာမလိုလောက်အောင် ကောင်းနေတာမျိုး။ Ford နဲ့ Jeep တို့ရဲ့ off-road ပြိုင်ပွဲကြီးက စတင်ပါပြီ။ ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရုံပါပဲ။
Volkswagen ID.4လား ? Chevrolet Bolt EUV လား ?
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ဈေးကွက်ထဲကို အရှိန်ပြင်းပြင်းတိုးဝင်လာတဲ့ VW ရဲ့ ID.4 compact crossover ကတော့ တခါအားအပြည့်သွင်းထားရင် မိုင် ၂၅၀ လောက်မောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီး ကတိတွေပေးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ $41,000 က စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို Chevy ရဲ့ Bolt EUV ကရော။ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
BMW iX လား ? Audi Q4 e-tron လား ?
အရင်ကတည်းက ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ အခုလိုမျိုး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကစားကွင်းထဲမှာလည်း ဆက်လက်ရှိနေတုန်းပါပဲ။ BMW ရဲ့ iX ကတော့ အစွန်းနှစ်ဘက်ရောက်တဲ့ ပုံစံမျိုးရှိပြီး electric crossover တစီးအနေနဲ့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တွေက အပြည့်နဲ့ပါ။ Audi ရဲ့ EV SUV ဖြစ်တဲ့ E-tron ကတော့ တော်တော်များများနဲ့ ရင်းနီးနေလောက်ပါပြီ။ မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရော အခုလို အမြင်အတိုင်းမှာ ဘယ်ကားကို ရွေးဖြစ်မလဲ။
Hyundai Motor Myanmar နှင့် Shwe Daehan Motor တို့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ မော်ဒယ်သစ် The New H-1 2021 ကို စတင်မိတ်ဆက်
Premier Automotive Ltd (PAL) ၏ Geely Showroom သစ်ကို မန္တလေးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်